imanoela fifaliana · Desambra 2012 · Global Voices teny Malagasy
imanoela fifaliana · Desambra, 2012
Nanomboka nandika tamin'ny 25 Jona 2011 · 1103 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i imanoela fifaliana tamin'ny Desambra, 2012
Nandritra ny fandaharana "Fitsarana Jamba?" tamin'ny fahitalavitra tao Portiogaly, ilay Lehiben'ny Mpisolovava (Batonnier) ao amin'ny holafitry ny Mpisolovava ao Portiogaly, Marinho Pinto, dia nanambara fa "ny zavatra iray isan'ny be indrindra fanondran'i Portiogaly dia ny Mpivarotena". Goavana tokoa ny fiantraikan'izay tety anaty aterineto, ary nanoloana ny resabe tahaka izany, voaresaka indray ny sary sy ny fitsaratsaram-poana mahazo ny vehivavy breziliana manerana izao tontolo izao.
Zanakavavin'ilay Mpanao Didy Jadona taloha no voafidy ho Filoham-Pirenena ao Korea Atsimo
Azia Atsinanana 29 Desambra 2012
Tamin'ny 19 Desambra 2012, Park Geun-hye dia voafidy ho Filoham-pirenena manaraka indray ao Korea Atsimo. Izy dia avy amin'ilay antoko ila havanana Saenuri party sady zanakavavin'ilay mpanao didy jadona taloha Park Chung-hee. Na dia teo aza ireo zava-bitan'i Park amin'izao izy vehivavy voalohany voafidy ho Filoham-pirenena ao anaty fiaraha-monina izay ny lehilahy no Loholona izao, ireo tanora liam-pandrosoana sy tia fihetsiketsehana dia manohitra mafy an'i Park.
Mopera Joel Tabora namintina ny haben'ny fahavoazana tamin'ny fandalovan'ilay rivo-doza Pablo tany amin'ny faritra atsimon'i Filipina: "Toy ireny miditra aminà faritra misy ady ireny ny miditra ao amin'ny Monisipaly Compostela, akondro aminà hekitara sy hazo fihinam-boa maro no nidaboka. Tsy manan-kohanina ny olona any zao. Tsy misy rano madio. Tsy misy onjam-pifandraisana. Afaka roa volana raha kely indrindra vao andrandraina ho tafaverina ny herinaratra."
Habaka Fanaovan-Gazety Angon-dRakitra Frantsay Mahaleotena OWNI Norahonana Hakatona
Eoropa Andrefana 28 Desambra 2012
Nivoaka iny herinandro lasa iny ny vaovao mikasika ny fanankatonana izay tsy azo idoviran'ny OWNI (OWNI.fr), Angon-drakitra Frantsay momba ny Fampahalalàm-baovao mahaleotena. Malaza amin'ny fiaraha-miasa akaiky miaraka amin'ny WikiLeaks, OWNI nampivoatra ny rindrambaiko WarLogs sy nanatanteraka ny famakafakana mahaliana ny amin'ny SpyFiles, ary dia nitatitra hatrany hatrany ny fanaraha-maso sy ny fitantanana ny aterineto ary ny fahalalahana an-tserasera.
Oseania 25 Desambra 2012
Mpianatra Maro Nanao Hetsi-Panoherana Eran'i Hongria Ho Fiarovana ny Fampianarana Tsy andoavam-bola
Any Hongria, ambetin-dresaka mahaliana hatrany ao anatina ady hevitra ny rafim-pampianarana tsy andoavam-bola ho an'ny sarambam-bem-bahoaka. Tamin'ity herinandro ity, nivadika ho hetsi-panoheran'ireo mpianatra nanerana ny firenena izany ady hevitra izany.
Fahazoana Vaovaom-Panjakana: Zonao izany!
Eoropa Andrefana 06 Desambra 2012
Tsy hoe mora lalandava ny mahazo ny vaovao, angon-drakitra ary antontan-taratasy any amin'ireo sampan-draharaham-panjakana, na dia marina aza fa an'ny olom-pirenena ihany ireo vaovao sy angona eny an-tanan-dry zareo. Izany no antony anankiray nandrisika ireo fikambanan'ny sosaity sivily sasany, izay manokan-tena ho amin'ny fikatrohana hisian'ny mangarahara, nanangana karazana vovonana an-tserasera hahafahan'ny olona mangataka ireo karazam-baovao avy amin'ny sampan-draharaham-panjakana.
Mivoaka Ny Trano Fidiovana: Haiti Sy Ny Andro Manerantany Ho An'ny Lavapiringa
Karaiba 04 Desambra 2012
Andro iraisam-pirenena amin'ny fampiasana lavapiringa ny 19 novambra. Ao anatin'ny mponina eran-tany 7 lavitrisa, 2.5 lavitrisan'ny olona no tsy afaka mampiasa lavapiringa madio - zany dia eo ho eo amin'ny olona 1 amin'ny 3. Ny sasany amin'izy ireo mipetraka any Karaiba; maro amin'izy ireo no mipetraka any Haiti - ary ny tsy fisian'ity zo fototra mahaolona momba ny fidiovana ity no mbola mampirongatra ny aretina sy ny fahafatesana amin'ny tsy antony.
Niverina Nandeha Indray ny Aterineto ao Siria
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 01 Desambra 2012
Niverina nandeha indray ny aterineto ao Siria - na farafaharatsiny amin'ny toerana sasatsasany, araka ny voalazan'ireo Siriana any ivelany, izay niezaka fatratra te-hifandray amin'ireo hava-tsy foy nandritra izay telo andro tsy nisian'ny fifandraisana sy aterineto izay.